कर्णालीमा विद्यालय सञ्चालनको तयारी, के पहिलेकै अवस्थामा संचालन होलान् तँ ? के के मापदण्ड छन् ? – HostKhabar ::
कर्णालीमा विद्यालय सञ्चालनको तयारी, के पहिलेकै अवस्थामा संचालन होलान् तँ ? के के मापदण्ड छन् ?
सुर्खेत : कोभिड १९ संक्रमण हुने जोखिमका कारण बन्द भएका कर्णालीका विद्यालयहरु सञ्चालनको तयारी थालिएको छ । सरकारलो कोरोना भाइसरमो महामारी न्युनिकरणका लागि गत चैत्र ११ गतेदेखि लकडाउन घोषणा गरे पछि विद्यालल पनि बन्द गरिएका थिए । सरकारले साउन ७ गतेबाट १ सय २० दिन लामो लकडाउन अन्त्यको घोषणा गरे पछि विद्यालय पनि सञ्चालनको तयारी थालिएको हो ।
लकडाउन अन्त्य भए पनि कोरोना भाइरसको जोखिम कायम रहेको अवस्थामा सरुक्षाका सतर्कता अपनाएर कर्णालीका विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी स्थानीय सरकारले गरेका छन् । संविधानतः माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा भए पछि प्रयाप्त सुरक्षा सतर्कता अपनाएर कर्णालीमा शिक्षण संस्थाहरु सञ्चालनको तयारीमा स्थानीय तहहरु जुटेका छन् ।
हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाले साउन २२ गतेबाट विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन अन्त्य गरेपछि विद्यालय पनि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्षपदम बहादरु लामाले बताए । ‘लकडाउन अन्त्य भएकोले साउन २२ गतेबाट विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ’ उनले भने, ‘हाल क्वारन्े टाइर्न बनाएका विद्यालयहरुलाई सेनिटाइज गरी अन्य ममर्त र सरसफाइ गर्ने काम भइरहेका छ ।’
विद्यार्थीबीच दुरी कायम गरेर बिहान, बेलुका, दिउँसो गरी तीन सिफ्टमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएकोउनले बताए। सिमकाटे गाउपाँलिकामा माध्यामिकतहसम्मका २३ वटा विद्यालय रहेका छन् । जम्ुलाको सिजं ा गाउपँ ालिकाले पनि विद्यालय सञ्चालनको तयारी गरेको छ । विद्यालय सञ्चालनका लागि जिल्ला प्रशासनसंग समन्वय गरेर तत्काल निर्णय गर्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवलसिंह रावलले बताए । गाउँपालिकामा कोरोना देखिएका ११ जना उपचार पछि निको भएर घर फर्किसकेकाले अब विद्यालय सञ्चालनको तयारी थतालिएको उनले बताए । ‘कोरोनाका कारण विद्यालयहरुमा क्वारेन्टाइन बनाए पछि विद्यालयहरु बन्द गर्नु परेको थियो’ उनले भने, ‘क्वारेन्टाइन बनाइएका विद्यालय खाली भए पछि सेनिटाइज गरेर सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौ ।’
साविकको कर्णाली अञ्चलका जिल्लाहरुमा कोरोना संक्रमण कम देखिएको छ । हम्ुला र डोल्पा जिल्ला कोरोना मक्त भइसकेका छन् । अन्य जिल्लामा पनि संक्रमितको संख्या न्यून रहेको छ । साविकको भेरी अञ्चलका स्थानीय तहले पनि विद्यालय सञ्चालनको तयारी गरको छन् । सरकारले भदौ १ गतेबाट विद्यालय सञ्चालन गर्ने बताए पनि आफुहरु त्यो भन्दा अघि नै सञ्चालन गर्नै तयारीमा रहेको सुर्खेतको चिङ्गगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष देव बहादुर चन्दले बताए । गाउँपालिकामा देखिएका २१ जना सबै डिस्चार्ज भएकाले अब विद्यालय सञ्चालनको तयारीमा लागेको बताए ।
लकडाउन अघि कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना नदेखिएको ठाउँमा विद्यालय सञ्चालनको लागि संघीय सरकारसंग अनमुति मागेको थियो । तर, संघीय सरकारबाट कुनै निर्णय नभए पछि विद्यालय सञ्चालन भएका थिएनन् । सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले सहज वातावरण भएका स्थानीय तहमा विद्यालय खोल्न आग्रह गरेको छ । यस अघि मन्त्रालयको मन्त्री स्तरीय बैठकले स्थानीय तहलाई विद्यालय सञ्चालनमा समन्वय गर्न आग्रह गरेको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका उप-सचिव विष्णुप्रसाद अधिकारीले स्थानीय तहहरु मन्त्रालयको विपद् प्रतिकार्य याजे नाको मापदण्डअनसुार विद्यालय सञ्चालन गनुपर्ने बताए ।
क्वारेन्टाइन बनाइएका विद्यालयलाई डिस इन्फेन्सन गर्नुपर्ने, आइसोलेसन बनाएको विद्यालयमा रगं रागे न गररे सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा अनिवार्य कायम गनपुर्ने जस्ता मापदण्ड तोकिएको छ । ‘हाल सम्म ५२ प्रतिशक स्थानीय तह कोरोना मक्त भइसकेका छन’, उनले भने ‘निजी विद्यालयहरुले पनिस्थानीय तहसगं छलफल गरिराख्नु भएको छ । सहज वातावरण भएर स्थानीय तहले सञ्चालन गर्न चाहेको अवस्थामा आज भोली पनि सञ्चालन गर्न सक्नहुन्छ’ ।’ संविधानले उच्चशिक्षा पदेश सरकारको मातहतमा राखेको छ ।
हाल सम्म कर्णालीमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या १८ सय ५१ पुगेको छ । भने ति मध्ये १६ सय ३९ जना उपचार पछि डिस्चार्ज भइसकेका छन् । हाल सम्म ६ जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ । नेपाल सरकारले कोरोना भाइरसको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै चैत्र ११ गतेबाट डकडाउन गरेको थियो । त्यो साउन ६ गते रातीबाट हटाएको छ । तर भदौ १ गतेबाट विद्यालय भर्ना लिने निर्णय गरेको छ ।
सबै जिल्लामा किताब पुग्यो
जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र सुर्खेतले कर्णालीका सबै जिल्लाहरुमा आवश्यक किताब पु¥याएको बताएको छ । केन्द्रले बैशाखदेखि नै स्थानीय तहहरुमा किताब पठाइएको बताएको छ । जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रका केन्द्रीय प्रवक्ता चित्रकुमार आचार्यले प्रत्येक स्थानीय तहका एजेन्टहरुले आ–आफनो क्षेत्रमा किताब लिएको बताए। ‘कर्णालीका हिमाली जिल्लाहरुमा त किताब फागुनमै पुगिसकेको थियो’ उनले भने, ‘नपुगेको तथा पहाडका जिल्लाहरुमा हाल किताब गइरहेको छ । अघिकांश क्षेत्रमा पुगिसकेको छ ।’